सुहागरातमा श्रीमती हातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन ! – Jagaran Nepal
त्यो मेरो बिहेको रात थियो। पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ। मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए।
कल्पनामा म कोठा छिर्दा मेरा पतिले मलाई दह्रोसँग अंगालो मारून् भन्ने चाहन्थेँ, निस्सासिने गरी चुम्बनहरू गरून् भन्ने सोच्थेँ र रातभर मलाई माया गरून् भन्ने चाहन्थेँ। तर वास्तविकतामा म कोठामा पुग्दा उनी निदाइसकेका थिए। म ३५ वर्षकी थिएँ र मसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको अनुभव थिएन।
त्यो अस्वीकार्यता एकदमै पीडादायी थियो। कलेजको बेला र काम गर्दा मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ। उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे, एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ। के मलाई पनि जिन्दगीमा त्यस्तो साथीको चाहना थिएन ?
तर मेरा पतिका शब्दहरूले सबैभन्दा बढी मलाई चोट पुर्याए। उनले भने, तिमीलाई जे मन लाग्छ गर। जोसँग सुत्न चाहन्छौँ सुत। म तिमीलाई केही भन्दिनँ अथवा कसैलाई यो कुरा भन्दिनँ। कसैसँगको सम्पर्कबाट बच्चा भए उसलाई म आफ्नो नाम दिन तयार छु।
यस्ता कुरा कुनै पनि पत्नीले आफ्ना पतिबाट सुन्न नपरोस्। उनी धोकेबाज थिए र उनले आफ्नो र परिवारको प्रतिष्ठताका लागि मलाई त्यस्तो गर्न भनिरहेका थिए। मेरा खुट्टा समाउँदै उनी रोए र भने, कृपया कसैलाई पनि यो कुरा नभन र मसँग सम्बन्ध विच्छेद पनि नगर।
मसँग चाहना, सपना र भावनाहरू छन्। तर मलाई माया गर्ने, मेरो ख्याल गर्ने, मेरा भावनाहरू बुझ्ने र मसँग जीवन बिताउने व्यक्तिसामु मात्रै म यी कुराहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यस्तो व्यक्तिका लागि प्रतीक्षरत छु। त्यस्तो व्यक्ति नभेटुञ्जेल मैले आफ्ना साथीहरूको यौ नजीवनबारे गोप्यरूपमा कुराकानी गरेर आफूलाई सन्तुष्ट पारिरहेकी छु।
मैले जे गरेकी छु त्यसका लागि मबारे धारणा बनाउने मानिसहरूको कुनै कमी छैन। मलाई विश्वास छ ती मानिसहरूले बुझ्नेछन् कि महिलाहरू निर्जीव होइनन्, उनीहरूका पनि अनेकौँ भावना हुन्छन्। १ वर्ष अगाडी बिबिसी हिन्दीमा प्रकाशित लेखको ट्रान्सलेटेट पाठ